Ingrid Wikholm amin'ny sparktur nandray ny fahafahana hanome ny antoka HSK / HBU ny dia mihanahana miandrandra manify.
Alao ny jiro sy ny smearing ny milina sy ny lovia kely fikambanana Holm ny antoka! Ny fanomezana tonga soa mafana. Apetraho ho tsatòka barika any am-piangonana, na manana izany naka tao an-trano. OBS! Isika koa dia manaiky ary nafarana kapoaka naratra!
HBU sy Holm Sports Club manome Holm rehetra sy Sundsvall faritra mba hanohana ny fikambanana miaraka amin'ny antitra sy ny kapoaka tavoahangy PET. Izany fotsiny toy izany, manao ny tontolo iainana ny fitia rehefa manome fanomezana kely! Ianao koa tsy lugging antoka ny tanàna, ary hiatrika ny milina ho an'ny sasany nanangona småkronor. Ho antsika, na izany aza, mahatonga azy io tsy tahaka fanampiana maro isan-! Pant Slanten notendrena tsotra 50/50 eo HSK sy HBU.
Mpitovo na kitapo ny biby, petra-bola kapoaka sy ny fitaratra tavoahangy.
Add särkild maitso antoka mahia akaikin'ny fanasokajiana-efitra ny fiangonana amin'ny Holm. Ny barika mivarina avy eo tsy tapaka.
Fako kitapo miaraka amin'ny antoka (AZAFADY nandamina PET / burk / petra-bola isaky ny lasakany avy fitaratra!).
Angony ny sasany gony ary aoka isika mahalala, raha te-hanary azy – 0730-332944.
– Alt. 1 Hamela azy any Holm sy Sundsvall, SMS:lahatsoratra / antso Info bebe kokoa momba ny toerana.
– Alt. 2 Get ireo naka any ho any aho Holmberg / LIDEN- / Kovland- / Sundsvall faritra. SMS:lahatsoratra / antso ka hanao hoe firy tao anatin'ny lasakany, ary misy anao / asa Ho isika hanao ny sisa!
Te-hanampy antsika hanangona hifaninana sa ianao no mipetraka ao amin'nyny any an-kafa tany Soeda? Raha toa ianao ka ampy “pantad” sy handova kely fanampiny “village fanahy” dia aza misalasala hanampy antsika mba hanangona hifaninana ao amin'ny faritra misy anao, na aiza na aiza ipetrahanao. Izahay anie hahatanteraka anareo amin'ny tanana manokana harona izay fotsiny miala amin'ny mitete-eny toerana akaiky anao (ianao tsy maintsy hitsangana sy tsatòka iray sy ny!).
Adinoy ny norvejiana antoka milina tranainy sy manohana Holm ambanivohitra Enoka Holms SK…